China KPL IPL SHR ashintshekayo isafire crystal Hlunga Izinwele Ukususwa Machine ifektri abakhiqizi | KEYLASER
Umshini wokususa izinwele we-KPL IPL SHR oguqukayo
Uhlelo lukhipha ubude obuhlukahlukene be-wavelength, i-spectrum ebanzi nokukhanya okukhulu. Ingagcwalisa i-cutile ku-derma futhi isebenze kumbala ongajwayelekile nesitsha se-capillary sokuphula amaseli we-pigment angajwayelekile, ukuvala imithambo yegazi engajwayelekile, kukhuthaze ukwanda kwe-collagen nokwenza ngcono ukuhlelwa kabusha kwemicu enwebeka, ekugcineni kufezekiswe injongo yombala ukususwa nokuvuselelwa kwesikhumba, ngenkathi kugcinwa isikhumba esijwayelekile nomjuluko wesimo usesimweni esihle.
Ukususwa Kwezinwele Okusheshayo Okungenabuhlungu
I-2.Optimal Pulse Technology Ukuvuselela Isikhumba Esisheshayo
3.Epidermal ukususwa / Skin ukuqina
Ukususwa kwe-4.Vascular / Face Lifting / Circles Dark
Ukwelashwa kwe -Ance / Ukususwa kwe-Ance
6.OPT IPL SHR DPL KPL imisebenzi eminingi
7.Ukususwa Kwemikhumbi Yegazi
Imodi ye-KPL, i-10-30HZ yokwehliswa okusheshayo nokungabi nabuhlungu
Uphenyo lwe-SHR lwenzelwe ukufudumeza izinwele zezinwele kancane kancane ngemvamisa ephezulu kepha amandla aphansi. Izinga lokushisa elinqwabelene likhuphuka kancane ku-dermis ukufeza ukuthambisa okungenabuhlungu.
Ubuchwepheshe be-KPL: Ngomehluko we-impedance esikhunjeni nasekushiseni kwangaphambi kokushisa okukhiqizwa lapho isikhumba sikhetha amandla we-optical ngokukhethekile, senza i-epidermis ne-dermis izicubu ezahlukahlukene ezigulayo zikhiqize umphumela we-pyrolysis okhanyayo. Ukumuncwa kwamandla we-RF akuthinteki ngombala wesikhumba, kungasebenzisela zombili umbala ojulile nesikhumba sombala okhanyayo. Khonamanjalo, ukuxhumana nobuchwepheshe bokupholisa obusetshenziswe ekhanda le-probe yokwelashwa kungaqeda umphumela wokushisa obangelwa amandla we-photon, kunciphise kakhulu ubuhlungu enqubweni yokwelashwa. Futhi wandise ukumelana kwesikhumba esingaphezulu, ukunciphisa ukumuncwa kwe-RF kwesikhumba esingaphezulu, kuthuthukisa kakhulu ukusebenza nokwelashwa nokuphepha.
Uhlelo Olusha Lokupholisa Somoya
Isistimu yokupholisa ye-Air compressor inyusa umehluko wezinga lokushisa phakathi kwezicubu ezingaphezulu nezingaphansi, okwenza ukwelashwa kube mnene. Ukupholisa okuguqukayo kwe-TEC ngobuncane -4 C kuvikela i-epidermis ngenkathi i-follicle yezinwele ishisa. Amazinga 5cooling kungase kushintshwe
I-KPL inobuchwepheshe obusha obuqhathaniswa ne-IPL SHR
Uhlelo lwe-1.Compressor lokupholisa ngokushesha Yenza umshini usebenze ngama-26 degree njalo namahora ayi-16 engasebenzi
I-2.Real sapphire crystal handpiece 30% ukwelashwa okuphumelela kakhulu kunesibambo esijwayelekile se-quartz, i-KPL handpiece ehleliwe 610-950nm KPL isihlungi sesandla Ngesihlungi se-sapphire crystal Ithempelesha yokubamba ingaba phakathi kuka -5 ℃ -5 ℃.
Isihlungi se-3.Water esivela e-USA, Yenza amanzi ahlanzeke futhi ahlanzeke
4.Isibani saseJalimane sangempela, izikhathi eziyi-1000000 zokudutshulwa
Umshini we-1.KPL onamandla amakhulu-3000W.
2. I-100% Lamp yaseMelika inezinhlamvu ezi-1 million
Isixhumi se-Germany esingenisiwe. Ikhwalithi ephezulu nokuphila isikhathi eside.
4. Okungenabuhlungu— Ukudluliswa kwangempela kwesafire namandla aphezulu, ukuphuma kwamandla amancane, umphumela ongcono. Kungeniswe ipuleti elibandayo leJapan semiconductor, ukupholisa okusheshayo, isikhathi eside sokuphila, ukusebenza kahle okuphezulu
5. Idizayini eyingqayizivele yesibambo se-KPL nokwakhiwa kwangaphakathi. Akunandaba ukuthi unamandla amakhulu kangakanani
udonse okokusebenza, ngeke kulimaze noma iyiphi ingxenye ngaphakathi. Sicela ubheke isingeniso esilandelayo.
6. Uhlelo lokuvikela i-alamu lokugeleza kwamanzi nezinga lokushisa kwamanzi: yeka konke ukusebenza ngokushesha uma kukhona ubungozi, ukuvikela abantu nomshini kunoma iyiphi ingozi okokuqala.
I-7.User-friendly design design: ukusethwa kwemingcele elula nokusebenza okulula.
I-8.German ingeniswe ipompo lamanzi ethule kakhulu, awukho umsindo, ukugeleza kwamanzi okukhudlwana kokupholisa okungcono, ukwandisa i-laser nempilo yomshini.
Isoftware enoHlelo Lomuntu
Langaphambilini Umshini we-KPL + SHR Wemisebenzi Ehlukahlukene Wobuhle beLaser yohlelo lokususa izinwele unomphela
Olandelayo: I-2021 ephathekayo q-switch nd yag yedivayisi yobuhle be-laser yokususa i-tattoo kanye nokuhluba ikhabhoni
Umshini wokususa izinwele we-Diode Laser Tuv Ce
Umshini Wokususa Izinwele wase-Germany Diode
Imishini Yokukhishwa Kwezinwele ze-Ipl
Umshini Wokususa Izinwele we-Diode Laser kathathu